Xildhibaanno sheegay in looga been-abuurtay Mooshinka ka dhanka ah Madaxweyne Farmaajo – Kalfadhi
Xildhibaanno sheegay in looga been-abuurtay Mooshinka ka dhanka ah Madaxweyne Farmaajo
Xildhibaan Sh. Shaacir Maxamed ayaa sheegay in looga been-abuurtay inuu ka mid yahay Xildhibaannada qeybta ka ah Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweyne Farmaajo. War uu siiyey wariyayaasha ayuu ku sheegay inuu warbaahinta ka maqlay inuu magaciisu ku jiro liiska Xildhibaannada loo gudbiyey Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee wada Mooshinka ka dhanka Madaxweynaha Dalka.
Waxa uu sheegay inuu garan la’yahay sababta loogu xusay magaciisa liis uusan waxba ka ogeen, sida uu hadalka u dhigay. “Halkaan waxaan ka cadaynayaa inaan bari ka ahay Mooshin-ka laga keenay Madaxweynaha Soomaaliya, oo magacayga lagu daray” ayuu yiri Xildhibaan Shaacir. Xildhibaankan waxaa lagu tiriyaa Mudane inta badan jooga Kulamada Golaha, haddana aan ka hadlin.
Sidaas oo kale, Xildhibaan Hudda Axmed Cali, oo ka tirsan Golaha Shacabka, ayaa iyaduna beenisay in ay wax ka og tahay Mooshin-ka ka dhanka ah Madaxweyne Farmaajo, oo ay ku jirtay Liiska Xildhibaannada ku qornaa Hindisaha loo gudbiyey Guddoomiyaha Golaha Shacabka. “Waxaan halkaan ka cadeynayaa, mooshin-kan la leeyahay waa la gudbiyay, in aan shaqa ku lahayn, ogeyna oo aanan saxiixin, waana layga been-abuurtay” ayey tiri Xildhibaan Hudda.
Intaas waxa ay raacisay in ay u aragto iney jiraan “Xildhibaanno Qaran Dumis ah” sida ay warka u dhigtay. “Waxaan u sheegeynaa iney waxay wadaan joojiyaan” ayey tiri Xildhibaannadu. Waxay ku eedeysay in waxa ay wadaan ay tahay qal-qal gelin, sida ay hadalka u dhigtay. “Wadanka waxa u iftiintay dowlad wanaagsan iyo hurumar, qalalaasana uma baahna” ayey tiri Hudda.
Golaha Iskaashiga Maamul Gobolleedyada Oo Taageeray Mooshinka Ka Dhanka Ah Madaxweyne Farmaajo